AutoSEO vs FullSEO: Semalt SEO सेवा तपाईले छनौट गर्नु पर्छ?
खोज इञ्जिन अनुकूलन एक कठिन विषय हो। जबकि लगभग सबै व्यवसाय अब एसईओ मा निर्भर गर्दछ आफ्नो संगठनलाई दाहिने आँखाको सामने राख्न, यो कुरा पनि सत्य हो कि केवल मुठीभर ईन्जिनियरहरूलाई Google र अन्य प्रमुख खोजी ईन्जिनहरूले के चाहान्छन् ठीकसँग थाहा छ। खेल मैदानको स्तर राख्नको लागि, खोज इञ्जिन अनुकूलनको कुञ्जीहरू नजिकबाट सुरक्षित राखिएको हो।
यसको मतलव SEO उपकरण र उत्तम अभ्यासहरू Google द्वारा प्रदान गरिएको निर्देशनहरूको सेटमा आधारित छैनन्, तर के काम गर्दछ र के गर्दैन भनेर परीक्षण गरेर। खोजी ईन्जिन अप्टिमाइजेसनमा तपाईले जति अधिक काम गर्नुहुन्छ, प्रमुख खोजी ईन्जिनहरूको चाहना, आवश्यकता र प्राथमिकताहरू स्पष्ट हुन्छन्।
Semalt मा हामीले हाम्रो SEO कौशलको सम्मान गर्न १० बर्ष बिताएका छौं। हामीले अब करिब १ 1.5 लाख वेबसाइटहरू विश्लेषण गरेका छौं र 600००,००० भन्दा बढि दर्ता भएका प्रयोगकर्ताहरूलाई घमण्ड गरिरहेका छौं। हामीसँग Google को पृष्ठ एक मात्र पृष्ठमा मात्र होइन, र श्रेणीकरणको धेरै माथि तपाईंको संगठन प्राप्त गर्न यसले लिने कुराको गहन समझ छ। पछिल्लो दशकमा, हामीले कडा परिश्रम गर्यौं एसईओ प्रदायक हुन धेरै अग्रणी संगठनहरूको लागि छनौटको।
तर हाम्रो कुन SEO सेवाहरू तपाइँले छनौट गर्नु पर्छ? आज हामी हाम्रो AutoSEO र FullSEO प्याकेजहरू हेर्नेछौं ; भिन्नता, समानताहरू, र कसरी पत्ता लगाउने कि कुन विकल्प तपाईंको लागि सही छ।
AutoSEO र FullSEO के हुन्?
पहिलो कुरा पहिलो हो: AutoSEO र FullSEO वास्तवमा के हुन् ?
एक व्यापक स्तरमा, AutoSEO र FullSEO दुई उत्पादनहरू हुन् जुन उही चीज गर्नका लागि लक्षित छ: तपाइँको वेबसाइटलाई अनुकूलन गर्नुहोस् तपाइँको खोज इञ्जिन श्रेणीकरण सुधार गर्न। तिनीहरू उत्पादनहरू हुन् जुन हामी Semalt मा घर-घर विकास गरेका छौं, र प्रत्येक पृथ्वी मा लगभग सबै देशहरुमा व्यवसाय द्वारा प्रयोग गरीएको छ।
तर यी आधारभूत समानताहरूबाट, उत्पादनहरू विचलित हुन थाल्छन्।
AutoSEO एक चतुर स्वचालित उपकरण हो जसले हाम्रो प्रविष्टि-स्तर प्याकेज प्रतिनिधित्व गर्दछ। AutoSEO SEO को दुनिया मा आफ्नो पहिलो कदम चालेको को लागी डिजाइन गरीएको छ र प्रयोगकर्ता लाई नियन्त्रण मा राख्छ।
फुलसेओ हाम्रो पूर्ण एसईओ प्याकेज हो। यो कसैको लागि डिजाइन गरिएको छ जो खोज इञ्जिन अनुकूलनलाई गम्भीरताका साथ लिनको लागि तयार छ र उत्तम, छिटो र सब भन्दा लामो-स्थायी परिणामहरू खोज्दैछ। तपाईं हामीलाई सबै भारी लिफ्टिंग छोड्न सक्नुहुनेछ, किनभने पूर्ण एसईओ प्रयोगकर्ताहरूले एसईओ विशेषज्ञहरूको हाम्रो टोलीमा पहुँच प्राप्त गर्छन्।
आउनुहोस्, यी समाधानहरूलाई नजिकबाट हेरौं, र प्रत्येक कसरी कार्य गर्दछ ठीक हिसाबले हेरौं।
AutoSEO को लागी एक गाइड
के तपाइँ ब्रान्डको दृश्यता र बिक्री बढाउन चाहानुहुन्छ? के तपाइँ खोज ईन्जिन अनुकूलन को दुनिया मा आफ्नो पहिलो कदमहरु ले जाँदै हुनुहुन्छ? के तपाइँ कुनै ठूलो लगानीको लागि प्रतिबद्ध गर्नु भन्दा पहिले केहि परिणामहरू हेर्न चाहनुहुन्छ?
AutoSEO तपाईंको लागि उत्पाद हुन सक्छ।
Semalt's AutoSEO प्याकेज व्यवसायको लागि डिजाइन गरिएको छ जुन साइट ट्राफिक बढाउन चाहान्छन्, तर शुरुआती चरणमा साइट प्रमोशनमा लगानी गर्न चाहँदैनन्, कमसेकम तिनीहरूले वास्तविक नतिजाहरू नदेखेसम्म। AutoSEO ले तपाईंलाई ड्राइभरको सिटमा राख्दछ, तपाईंलाई एसईओ अभियानहरू सुरूवात गर्नको लागि US $ ०.99। को रूपमा ।
कसरी AutoSEO काम गर्दछ?
आउनुहोस् AutoSEO कसरी काम गर्दछ बिल्कुलको ब्रेकडाउनमा एक नजर राख्दछौं।
रेजिष्ट्रेसन: तपाई सरल AutoSEO दर्ता फारम भर्ने प्रक्रिया शुरू गर्नुहोस्।
वेबसाइट विश्लेषण: तपाईंको वेबसाइट विश्लेषण गरिएको छ, र AutoSEO रिपोर्ट गर्नेछ तपाईंको साइटले वेबसाइट निर्माण र SEO उद्योग मापदण्डको बिरूद्ध कति राम्रो प्रदर्शन गर्‍यो।
रणनीति विकास: हाम्रो वरिष्ठ एसईओ विशेषज्ञहरू मध्ये एकसँग काम गर्दै, तपाईंको Semalt प्रबन्धकले तपाईंको वेबसाइटको अधिक विस्तृत विश्लेषण चलाउनेछ, र त्रुटिहरू र अक्षमताको सूची सिर्जना गर्दछ जुन ठीक गर्न आवश्यक छ।
रिपोर्ट सिफारिसहरू लागू गर्दै: एक पटक हामीलाई फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकल (FTP) वा CMS प्रशासक प्यानल पहुँच प्रदान भएपछि, हाम्रा ईन्जिनियरहरूले एक सफल AutoSEO अभियानको ग्यारेन्टीको लागि सिफारिसहरू लागू गर्दछन्।
कीवर्ड अनुसन्धान: एक एसईओ इञ्जिनियरले तपाइँको वेबसाइटमा समावेश गर्न कुञ्जी शब्दहरूको सूची सिर्जना गर्दछ, बिक्री र ट्राफिक बढाउनको लागि छनौट गरियो।
लि building ्क निर्माण: AutoSEO ले तपाइँको साइट भर र विश्वसनीय स्रोतहरूबाट प्राकृतिक लि links्कहरू राख्न सुरू गर्दछ, यसको खोजी इञ्जिन दृश्यता बढाउँदै। Semalt सँग ,000०,००० भन्दा बढी उच्च-गुणवत्ता पार्टनर साइटहरूको डाटाबेस छ, र लि domain ्कहरू डोमेन युग र ट्रस्टर्यान्कको आधारमा छानिएका छन्। लिंक भवन मापन गतिमा निम्न अनुपातमा प्रदर्शन गरिएको छ: १०% ब्रान्ड नाम लि links्क, %०% ए links्कर लि links्क, %०% गैर-ए links्कर लिंकहरू।
अभियान ट्र्याकिंग: तपाईंको अभियानको सफलता पदोन्नती कुञ्जी सूचीको दैनिक रैंकिंग अपडेट मार्फत ट्र्याक गरियो।
चलिरहेको अनुगमन: AutoSEO अभियानको प्रगति निगरानी गर्न जारी राख्दछ, ईमेल वा आन्तरिक सूचना प्रणाली मार्फत रिपोर्टहरू प्रदान गर्दै।
को लागी AutoSEO को हो?
AutoSEO ती व्यक्तिहरूको लागि डिजाइन गरिएको छ जसले SEOको बारेमा थोरै लगानी गर्न अघि उनीहरूको बारेमा बढी जान्न चाहान्छन्। यो परीक्षक र टिंकरहरू हो जसले पारदर्शिता र नियन्त्रण मन पराउँछन्। यो कसैको लागि हो जुन आफ्नो एसईओ यात्रा लागत प्रभावी र जानकारीपूर्ण तरिकामा सुरू गर्न चाहन्छ।
पूर्ण SEE को लागी एक गाइड
के तपाई उत्तम हुन चाहानुहुन्छ? के तपाई खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसनको मूल्य बुझ्नुहुन्छ, र सब भन्दा व्यापक र प्रभावकारी समाधान सम्भव चाहनुहुन्छ? के तपाईं एक प्रमाणित टीममा लगानी गर्न चाहानुहुन्छ जसले राम्रो परिणामहरू प्रदान गर्न सक्दछ?
FullSEO सही प्याकेज हो।
फुलसियो Semalt को SEO प्रस्तावहरूको Rolls-Royce हो। यो यसको कोरमा व्यापक SEO रणनीतिको साथ एकीकृत समाधान हो। तपाइँ उद्योगको अग्रणी विशेषज्ञहरूबाट गहिरो विश्लेषण पाउनुहुनेछ, केवल तपाइँको साइटको मात्र होइन, प्रतिस्पर्धीहरूका साइटहरू र आलामा जहाँ तपाइँको कम्पनीले काम गर्दछ। यसले पूर्ण, एसईओ प्रविधिको प्रयोग गर्दछ, र Semalt विशेषज्ञहरूको टोलीद्वारा पूर्ण साइट विकास प्रदान गर्दछ जुन निरन्तर सञ्चारमा हुनेछन्। यस प्याकेजले महत्वपूर्ण वेबसाइट ट्राफिक वृद्धि र उच्च रूपान्तरण दरहरूको ग्यारेन्टी दिन्छ।
कसरी फुलसियो काम गर्दछ?
पूर्ण एसईओ प्याकेजलाई चार मुख्य श्रेणिहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ: विश्लेषण, आन्तरिक अप्टिमाइजेसन, लिंक निर्माण र समर्थन।
एक गहन विश्लेषण Semalt SEO विशेषज्ञहरूको टोली र तपाइँको व्यक्तिगत Semalt प्रबन्धक द्वारा आयोजित गरीनेछ। यो विश्लेषण कभर हुनेछ:
सब भन्दा सान्दर्भिक कुञ्जी शव्दहरू पहिचान गर्दै जुन सम्भव बृद्धि भएको र सम्भव सबै लक्षित दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्दछ।
वेबसाइट ढाँचा र कीवर्ड वितरणको विश्लेषण यो कसरी एसईओ उत्तम अभ्यासहरूसँग पign्क्तिबद्ध गर्छ र वेब पृष्ठहरूको चयन गर्दछ जुन वेबसाइटको प्रमोशनको केन्द्रबिन्दु हुनेछ।
तपाइँको प्रतिस्पर्धी र कोठा को वेबसाइट को बारे मा जानकारी एकत्र गर्दै उच्चतम सम्भव Google रैंकिंग प्राप्त गर्न।
एकपटक विश्लेषण पूर्ण भएपछि एसईओ विशेषज्ञहरूको टोली, Semalt वेब डेभलपरसँग मिलेर काम गर्दै, तपाईंको वेबसाइटको आन्तरिक अप्टिमाइजेसनको खोजी गर्नेछ ताकि खोजी ईन्जिन रैंकिंग मापदण्ड पूरा गर्न र कुनै त्रुटि वा अवरोधहरूबाट छुटकारा पाउन सक्छ जुन तपाईं समात्नुहुन्छ। फिर्ता आन्तरिक अनुकूलन चरण कभर हुनेछ:
मेटा ट्याग र Alt ट्यागको निर्माण अघिल्लो किवर्ड विश्लेषणमा आधारित।
वेबसाइट HTML कोड विस्तार र बृद्धि गर्दै र आवश्यक गुणहरू राख्दै।
Robots.txt र .htaccess फाइलहरू सम्पादन गर्दै ताकि वेबसाइट खोजी ईन्जिनहरूमा देखा पर्दछ। वेबसाइटको पृष्ठहरूको पूर्ण अनुक्रमणिका लागि साइटम्याप फाईल उत्पन्न गर्दै।
वेबसाइटमा सामाजिक संलग्नता बटनहरू राख्दै सुधारिएको स for्लग्नताको लागि।
जबकि यो आन्तरिक अनुकूलन प्रक्रियाको एक हिस्सा मान्न सकिन्छ, लि building्क निर्माण आफैमा एक चरण हुनको लागि पर्याप्त महत्त्वपूर्ण छ। लि building्क निर्माणको क्रममा, SEO विशेषज्ञहरूको हाम्रो टोलीले:
तपाईंको वेबसाइटको 'लिंक जुस' विश्लेषण गर्नुहोस् (खोजी ईन्जिन मूल्य वा इक्विटी एक पृष्ठबाट अर्कोमा पारियो)।
वेबपेजको गुणस्तर संरक्षण गर्न अनावश्यक वा सहयोगी बाह्य लिंकहरू बन्द गर्नुहोस्।
नयाँ, अधिक प्रभावकारी लिंकहरू राख्न उत्तम ठाउँहरू पहिचान गर्नुहोस्।
आलामा सम्बन्धित लिंक जुस बनाउनुहोस् जुन गुगलमा शीर्ष स्पॉटहरूमा पुग्न आवश्यक हुन्छ। यो तपाईंको पद सम्बन्धी प्रभावकारिता बढाउनको लागि तपाईंको विषयसँग सम्बन्धित अद्वितीय सामग्रीमा क्वालिटी लि links्कहरू एकीकृत गरेर गरिन्छ।
ठेगाना त्रुटि 4०4 सन्देश र टुटेका लिंकहरू हटाउनुहोस्।
अन्तिम तर धेरै तरिकाहरूमा, फुलसेओ पजलको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण टुक्राहरू तपाईंको व्यक्तिगत Semalt प्रबन्धक द्वारा उपलब्ध चलिरहेको समर्थन हो। तपाईको ब्यवस्थापकले तपाईको फुलसेओ अभियानको प्रगति दैनिक अनुगमन गर्दछ, समायोजन बनाउँदछ र तपाईलाई प्रत्येक चरणमा पोष्ट गर्दछ। तपाईंको प्रबन्धकले:
अभियानको प्रगतिको दैनिक वा अन-अनुरोध रिपोर्टहरू प्रदान गर्नुहोस्।
तपाईंलाई रिपोर्टि reporting केन्द्रमा पहुँच दिनुहोस् जहाँ तपाईं विस्तृत अभियान विश्लेषकहरू अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ।
को लागी FullSEO को हो?
फुलसेओ कसैको लागि डिजाइन गरिएको छ जुन सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनलाई गम्भीरतासाथ लिन तयार छ, चाहे ठुलो बहुराष्ट्रिय वा सानो स्थानीय व्यापार हो। यो एक पूर्ण प्याकेज हो जुन तपाईंलाई जस्तो मनपर्दो वा ह्यान्ड्स-फ्री जस्तो तपाईंलाई मनपर्दछ। यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइट ट्राफिक, तपाईंको रूपान्तरण दर वा केवल तपाईंको कम्पनीको तल्लो रेखा बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ उत्तम उपकरण उपलब्ध छैन।
AutoSEO बनाम पूर्ण SEE: कल गर्दै
कुन प्याकेज छनौट गर्न अझै पक्का छैन?
एउटा विकल्प भनेको तपाईंको यात्रा १ 14-दिनको साथ शुरू गर्नु हो , AutoSEO को दायित्व परीक्षण रन मात्र $ ०.99 for को लागि। यदि तपाईलाई केहि चाहिएको जस्तो लाग्छ भने तपाई सजिलैसँग फुलसेओमा स्विच गर्न सक्नुहुन्छ!
अर्को विकल्प भनेको सुन्नको लागि हाम्रो ग्राहकहरूले प्रत्येक विकल्पको बारेमा के भन्छन्। अन्य संगठनहरूले प्रत्येक प्याकेजको बारेमा कस्तो महसुस गर्यो भनेर अन्तर्दृष्टिका लागि हाम्रो ग्राहक प्रशंसापत्र पृष्ठ जाँच गर्नुहोस् - पेशेवरहरू, कन्स र सोच्नका लागि चीजहरू।
दिनको अन्त्यमा, तपाईले कुन प्याकेज रोज्नुभयो भन्ने कुराको फरक पर्दैन, तपाई विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ कि तपाइँको वेबसाइट र समग्र तपाइँको दुबै यसको लागि अझ राम्रो हुनेछ। एक सुधारिएको गुगल रैंकिंग, अधिक यातायात, एक उच्च रूपान्तरण दर र राम्रो तल रेखा सबै पहुँच भित्र।
त्यहाँ खेर जाने समय छैन। आज हाम्रो मैत्री टीमलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!